भोलिदेखि ५२ करोड ४१ लाख कित्ता सेयर निष्काशन हुँदै, कहिलेसम्म दिने आवेदन ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > भोलिदेखि ५२ करोड ४१ लाख कित्ता सेयर निष्काशन हुँदै, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
काठमाडौं । भोलि अर्थात वैशाख ६ गतेदेखि अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले १ः०.५ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले सेयरधनीहरुलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँका दरले ५२ करोड ४१ लाख १९ हजार ७ सय रुपैयाँको ५२ लाख ४१ हजार १९७ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल जनाएको छ ।
हकप्रद सेयरमा आवेदन दिँन धितोपत्र बोर्डबाट सि–आश्वा सदस्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन पाइने छ भने मेरो सेयरबाट पनि आवेदन दिन सकिन्छ ।
२०७८ वैशाख ५ गते १०:५९ मा प्रकाशित
बैंकका सीईओको तलब वृद्धिबारे अब सोच्नुपर्छ : अर्थमन्त्री
मुसहर बस्तीमा धुर्मुस-सुन्तलीले यसरी मनाए भ्यालेन्टाईन(फोटोफिचर)
एक साताका लागि सुनचाँदी व्यवसाय बन्द, दैनिक दरभाउ पनि नतोकिने
यामाहाको रे जेट आर र फ्यासिनो १२५ एफ आई मोडलका स्कुटरमा के छ विशेषता, कति पर्छ मूल्य ?
सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय : यी हुन् अनिश्चितकालका लागि बन्द हुने सेवा तथा क्षेत्रहरु !